बिद्यालय शान्ति क्षेत्र कि राजनीति क्षेत्र ?
विकासको प्रमुख औजार शिक्षा हो । औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने थलो विद्यालय हो । विद्यालय विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने वैधानिक संस्था हो । यो शान्ति क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने एक विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, यहाँ विद्यालय राजनीति क्षेत्रको रुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।
समाजका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नको लागि समाजमा नै स्थापित औपचारिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यालय भनिन्छ । जसले सधै समाजको भलाइका लागि कार्य गर्दछ । राष्ट्रको भविष्यको लागि योग्य जनशक्ति निर्माण गर्दछ । विद्यालयले समाजिक मुल्य तथा आर्दशहरु भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने काम गर्छ । एउटा वालकलाई पूर्ण मानिस बनाउने कार्यमा विद्यालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र शान्तिको प्रत्याभुति हुनुपर्छ न कि राजनीति क्षेत्र भएको महशुस होस । विद्यालयमा द्वन्द्व हटाई शान्ति कायम गर्नुपर्छ ।
यहाँ देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, अविकासको कारण र अशान्तिमय परिवेशले मात्र विद्यालय अशान्त भएका होइनन् । विद्यालयहरुमा हुने बन्द, हडताल, भौतिक असुविधा, विद्यालय भित्रको विभेद, हिंसा, आर्थिक अभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीति, शैक्षिक वातावरणको कमी आदिले पनि विद्यालयको शान्तिपना गुमेको देखिन्छ । तसर्थ, विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन आवश्यक छ ।
हुम्लाका विद्यालय शान्ति क्षेत्र कि राजनीति क्षेत्र हुन भन्नेमा प्रश्न चिन्न छ ? विद्यालय ज्ञानप्रदान गर्ने र शिक्षा आर्जन गर्ने संस्था हो । शिक्षा एउटा गतिशिल प्रकृया हो । शिक्षाले व्यक्ति समाज, संस्था, राष्ट्र, र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा फरक फरक काम गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारेको हुन्छ र परिणाम दिएको हुन्छ । आधुनिक युगमा र राज्यसंग संबन्धित समस्त विषयहरु राजनीतिले अध्ययन गर्दछ भने संघर्ष, कलह र भेदभावरहित, शान्तिपुर्ण सामाजिक जिवन राजनीतिको लक्ष्य भित्र पर्दछ । तर, विडम्बना यहाँ विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण नभई राजनीतिक हस्तक्षेप र बढ्दो अनावश्यक राजनैतिक क्रियाकलापहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन सकेका छैनन् ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र केवल खोक्रो नारा र अभियानमा मात्र सिमित बनेको छ । विद्यालयमा शिक्षकको अनियमितता, विद्यार्थीको अनुशासनहिनता, स्थानिय सरकार र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइकोे मनपरितन्त्रले विद्यालय अशान्त बनेको यथार्त कसैबाट लुकेको छैन । त्यसै गरी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभाबक, स्थानिय सरकार र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको राजनीति गर्ने ठाउँ विद्यालय भएका छन् । अन्यको लागि पनि विद्यालय राजनीति प्रयोगशाला बनेको छ ।
नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतको द्वन्द्वले देशको अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अस्त व्यस्त बनाएको थियो । द्वन्द्वरत पक्षले विद्यालयलाई व्यारेक र कार्यक्रमस्थलका रुपमा प्रयोग गरेका थिए । गैर सरकारी संस्था र अन्य क्षेत्रले विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन अभियान र कार्यक्रम थालेका थिए । फलस्वरुप २०६८ जेठ ११ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्‍यो ।
शान्ति क्षेत्र ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरी राज्यले विद्यालय शान्ति क्षेत्र र बालमैत्री शिक्षण को लागि १४९ बुँदे मापदण्ड तोकेको छ । यसको कार्यन्वयन तथा पालना गर्नु अबको आवश्यकता रहेको छ । जसबाट नै विद्यालय शान्ति क्षेत्र बन्ने र राजनीतिमुक्त क्षेत्र हुने छ । जुन हुम्लाको आवश्यकता पनि हो ।
शिक्षा समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । शिक्षाको माध्यमबाट समाज र राष्ट्रको आवश्यकताहरु पुर्ति हुन्छन् । शिक्षालाई समाज र राष्ट्रहरुका विद्यमान विभिन्न तत्वहरुले प्रभाव पार्दछन् । यहाँ हुने सकारात्मक र नकारात्मक गतिविधिहरुले विद्यालयमा शान्ति र अशान्तिको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विद्यालयमा कस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने ? कसरी शिक्षा प्रदान गर्ने ? कस्ताले शिक्षा प्रदान गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । विद्यालयमा अहिले शैक्षिक अभ्यास भन्दा पनि शिक्षामा राजनीतिक अभ्यास भइरहेको देखिन्छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन नसक्नुमा कुनै एउटा कारण मात्र नभई धेरै कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन् । यिनीहरुमा राजनैतिक कारण प्रमुख हो । नेपालमा हुने पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकको बढि प्रयोग गरेको पाईन्छ । जसमा द्वन्द्व सिर्जना भएको हुन्छ । राजनैतिक पार्टी तथा भातृ संगठनको प्रयोग केन्द्र एवं कार्यक्रमस्थल विद्यालय बनेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आ–आफ्नो पार्टीका मान्छे ल्याउन र नाजायज माग पुराको नाममा विद्यालय बन्द हडतालको शिकार भएका छन् ।
यसैगरी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरुको अवस्था, नियूक्ति लगाएतका विषयमा गरिने पक्षपाती व्यबहारले पनि विद्यालय तनावग्रस्त र अशान्त छन् । यस्तै सामाजिक कारणले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । समाजका विभिन्न, वर्ग, जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति र राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरु विद्यालयमा आउछन् । सो अनुरुप सोच, सुनुवाई र संगतमा भिन्नता पर्छ । फरक रितिरिवाज चाडपर्वअनुसार विद्यालयमा स्थानिय विदाको लागि विवाद हुन्छ ।
यतिमात्र होइन विद्यालयमा लागुपदार्थको दुव्र्यसन पनि बढेको छ । विद्यालय अशान्त हुनुको अर्को कारण यो हो । यसरी नै शैक्षिक रुपमा बालमैत्री शिक्षा विधिको प्रयोगमा कमी हुनु, परीक्षा प्रणालीमा अनियमितता हुनु, अस्थिर शैक्षिक नीति, लैङ्गीक विभेद जस्ता कारणहरुले पनि विद्यालय अशान्त छन् । विद्यालयको भवन, फर्निचर, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदानको अभाव, पुस्तकालय, प्रयोगशाला खेलकुद सामाग्री, शैक्षिक सामाग्रीको अभाव, दैविक प्रकोप, शिक्षक कर्मचारीको अपर्याप्तता, व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन सकेका छैनन् ।
यसरी नै संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग को व्यवस्था नहुनु, शिक्षकहरुबिच विविधता हुनु, सेवा सुविधामा विभेद हुनु, अस्पष्ट कानून आदिले पनि बेला बेलामा विद्यालयले आन्दोनको सामना गर्नु पर्छ । त्यसैले यी समस्याहरुको समाधानको खोजी गरी विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउनु अहिलेको अपरीहार्यता हो । अहिलेको अवस्थाबाट हुम्लाका विद्यालयहरुलाई माथि उठाउनु पर्दछ । कुनै पनि विद्यालयले समाज र राष्ट्रको समुन्नत विकासको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ । विद्यालयले समाज र राष्ट्रको लागि आबश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरुको उत्पादन गर्दछ । बालबालिकाहरुलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरी सचेत नागरिक बनाई विद्यालय मात्र नभई राष्ट्रको शान्ति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
जग बलियो भयो भने मात्र घर बलियो हुन्छ भने झैं विद्यालय शान्ति क्षेत्र संगै देश शान्ति क्षेत्र हुनेछ । मुलत ः सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न, शैक्षिक गुणस्तर बृद्धी गर्न, शिक्षालाई नैसर्गीक अधिकारको रुपमा लिन, शिक्षामा समान पहुँच हुन, फरक जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, बिचार, संस्कारप्रति सम्मान गर्न, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताकासाथ सभ्य र शिक्षित नागरिक बनाउन, विद्यालय भित्र हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु अन्त्य गर्न र विद्यालयमा हुने राजनीतिलाई निषेध गर्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन आवश्यक छ ।
अन्तमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका शैक्षिक लगायत अन्य सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धता पुरा गर्न यसले ठोस बल पु¥याउछ । साथै हुम्लाको शैक्षिक विकास गर्न, विद्यालय सुधार गर्न र शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन यस मान्यताले मद्दत गर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्माण र राजनीति क्षेत्र मुक्त गर्न कुनै एक पक्षको प्रयास मात्र नभई सरोकारवाला सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो संभव छ । त्यसैले विद्यालय शान्ति क्षेत्र निमार्ण गर्न तर्फ लागौं ।